Kembangan Group of Medical Centres | ဆံသားနှင့်ဉီးရေပြား ကုသမှု
ကမ်ဘန်ဂန်-သု၀ဏ္ဏ အရေပြား၊ အလှအပနှင့် ကျန်းမာရေးအထူးကုဆေးခန်း
ကမ်ဘန်ဂန်-မြစ်ကြီးနား အရေပြား၊ အလှအပနှင့် ကျန်းမာရေးအထူးကုဆေးခန်း
ခွဲစိတ်မှုမလို လှပမှုဆိုင်ရာ ကုသမှုများ
အဆီပိုများကို နာရီပိုင်းအတွင်း စုပ်ထုတ်ခြင်း
မလိုအပ်သော အဆီပိုများကို နာရီပိုင်းတွင်း စုပ်ထုတ်ခြင်း
မလိုအပ်သော အဆီပိုများ စုပ်ထုတ်ခြင်း
မလိုအပ်သော အမွှေးအမျှင်များ ဖယ်ရှားခြင်း
သွေးရည်ကြည် အစားထိုး ကုထုံး - ရီဂျင်လဘ်(ပီအာပီ)
ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် : +959772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ပြောင်းရန် :
ဆံသားနှင့် ဦးရေပြားကို စက်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း Hair Analysis
ဆံပင်သန်စွမ်းစေရန် ဆေးကုသခြင်း Hair Medical Treatment
ဦးရေပြားအတွင်းသို့ ဆေးထိုးကုသခြင်း Hair Mesotherap
လေဆာစက်ဖြင့် ဆံသားသန်စွမ်းစေရန်နှင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ကုသခြင်း Hair Laser
ဆံပင်အစားထိုးစိုက်ခြင်း Hair Transplant
PRP မိမိသွေးရည်ကြည် အစားထိုး ကုထုံး ဖြင့် ကုသခြင်း
အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတိုင်း အရွယ်ရလာသည်နှင့်အမျှ ဆံချည်မျှင်လေးများ ပါးလာကာ ဆံပင်ကျွတ်ထွက်လေ့ ရှိကြပါသည်။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းမှာ တစ်နေ့လျှင် အပင် (၅၀) မှ (၁၀၀) ထိ ကျွတ်တတ်ပါသည်။ ထိုထက်ပိုပြီး ကျွတ်လာပါက သာမန် မဟုတ်သောဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဟု သတ်မှတ်ပြီး ထိပ်ပြောင်လာခြင်း၊ ဆံပင်အကွက်လိုက် ကျွတ်ခြင်း၊ ဆံပင်ကျဲလာခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါသည်။ ဆံပင်ကျွတ်ရခြင်းမှာ-အမျိုးသားများတွင် ဟော်မုန်း DHTကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ တခြားသော Autoimmune ရောဂါများ၊ ပဋီဇီဝဆေးများ၊ မျိုးရိုးကြောင့် ကျွတ်ခြင်းအမျိုးသမီးများတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကျွတ်ခြင်း၊ သံဓာတ်အားနည်းခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းနှင့် ဆံပင်ကောက်ဆေးဖြောင့်ဆေးများကြောင့် ကျွတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အရင်ဆုံးဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေရန် လူနာဧ။်ရာဇဝင် နှင့် ဆံသားဧ။်အခြေအနေ စမ်းသပ်ခြင်း Hair Analysis ပြုလုပ်ရမည်။ Hair Analysis တွင် ဆံပင်ကျွတ်သောအဆင့် Alopecia ဦးရေပြားကောင်းမကောင်း (Scalp Analysis) နှင့် ဆံသားသေးမျှင်မှု၊ ဆံပင်အရေအတွက် တို့ကို စစ်ဆေးကာ ထွက်လာသော အဖြေပေါ်မူတည်ပြီး ကုသမှုကွဲပြားပါသည်။
1-Laser Hair Treatment - Laser ရောင်ခြည်ဖြင့် ဦးရေပြားထဲရှိ ဆံပင်ဥများကို လှုံဆော်ပေးပြီး ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေရန်၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ရပ်တန့်စေရန် ကုသခြင်း ဖြစ်သည်။
2-Hair Transplant (ဆံပင်စိုက်ခြင်း) - တစ်ခဏတာမဟုတ်သော တသက်တာ ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေရန် မိမိဆံပင်ဖြင့်သာ ပြောင်းစိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆံပင် မစိုက်ခင်ဆရာဝန် နှင့် မိမိလိုချင်သော အပင် အရေအတွက်ကို ဆွေးနွေးနိင်ပါသည်။ ဆံပင်စိုက်ချိန်မှာ (၄-၆)နာရီကြာပြီး အနည်းငယ်ထုံခြင်းမှလွဲပြီး ကြီးမားသော ဆိုးကျိုးမဖြစ်နိင်ပါ။ အမာရွတ်မကျန်ပါ။ အနာကျက်ချိန် အလွန်မြန်ဆန်ပြီး လိုချင်နေရာအလိုက် Section ခွဲပြီးစိုက်နိုင်သောကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ထိပ်ပြောင်လာခြင်း တို့အတွက် အလွန်ထိရောက်သော ကုသမှုနည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ နဂိုမူလဆံပင်အတိုင်း ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုကို ပြန်လည်ရရှိစေသော အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။
Medication - ဆံပင်အလွန်အမင်း မကျဲသူများအတွက် mesotherapy ကုထုံး အသုံးပြုခြင်း၊ ဖြန်းဆေး၊ သောက်ဆေး များဖြင့် ကုသနိုင်ပါသည်။
+95 1 540 661 , +95 1 549 167, +959448 026 197, +959795 899 634
အမှတ် ၄၃၉၊၄၄၁၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ဆရာစံရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။
+95 1 2333 790, +959778 527 793~4
+959 898 797 330, +959 750 113 700
No.453, Room No.4-5, Yuzuna Ward, Pyi Htaung Su Main Road, Myitkyina, Kachin State.
Copyright © Kembangan. All rights reserved. Developed by ypadsgroup (Youth Power Advertising Group).